တောင်ပေါ်က တယောသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်ပေါ်က တယောသံ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 8, 2012 in Creative Writing | 24 comments
တောင်ပေါ်က တယောသံ (Photo – Internet)
ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ ၎င်း၏ မြေးဖြစ်သူ မောင်အောင်ဦးအား ကြည့်၍ တခွီးခွီး ရယ်မောလိုက်ပြီး –
“ငါ့မြေးနိုင်ရောကွယ်၊ သရဲ နေနေ ဘာနေနေပေါ့ကွာ၊ အဘ က လက်သံ ကောင်းလို့ ကောင်းကြောင်း ပြောတာပဲ၊ အဲ … ပြောရရင်၊ အဲ့ဒီ လက်သံလေးကို နားထောင်ချင်လို့ အဘက အခု ထိုင်နေတာပဲ ငါ့မြေးရဲ့”
ရေးသားသူ – မဟာရာဇာ အံစာတုံး
မင်းသား ရန်အောင်တော့ ဟုတ်လောက်ပါဝူးနော်…. :hee:
ထုံးစံအတိုင်း ဆက်လက် စောင့်မျှော် နေပါ့မယ်… နောက်အပိုင်းများကို……
စိတ်ဝင်တစားအားပေးသွားပြီး နောက်ဆက်တွဲစောင့်မျှော်နေတယ်နော် အမြန်လေး..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ပုံမှာတယောထိုးနေတာ သကြားပုလင်းအံစာ များလားကွယ် ..
ဆုံးအောင် .. အင်း .. ဆုံးအောင် ရေးမှာဘာလို့ ..
ဆက်လက် အားပေး ဖတ်ရှုကြမယ် ဆိုတာ သိရလို့လည်း
စာရေးသူ တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်ရပါတယ် ခင်ဗျာ …
ပီးဒေါ့ .. ပို့စ်ထဲက ပုံကဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်က တွေ့မိတွေ့ရာ တယောထိုးနေတဲ့ ပုံကို တင်လိုက်တာပါ ခည … အနော့်ပုံ ဟုတ်ရဘာဘူး ….
အနော့်ပုံကျည့်ချင်ရင် .. ဟောဒီမှာ …
[ Deleted by GaDoneGyi . ]
(ကြုံတုံးလေး ဝင်ပြီး ကျော်ညာရဒါဂိုးးးးး)
အားပေးဖတ်ရှုသွားကြသူ အပေါင်းတို့အား ..
ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း ……
အယ်.. ဟမ်းဆမ်း ပါဘဲလား အေ့..သက်စွန့် ဆံဖျား ဘာတွေများတွေးနေပါလိမ့်..
အံစာတုံး ရဲ့ နာမည်ရင်းဟာ အောင်အောင်ဦး ပဲ ဖြစ်ရမယ်
ဒီဂလူဂျီးက ပဟေဠိ လာညှိနေသေး …
အနော့်နာမည်ဂ အောင်အောင်ဦး ..
အောင်အောင်ဦးက ဂိုးသမားဗျ …
အပေါ်ဂ အမဂျီး Candle ခညာ ..
အဲ့ရုပ်လားဂျ ဟမ်းဆမ်းဒါ ..
ဂလောက်ဆိုးဒဲ့ ရုပ်ကို …..
ကိုယ့်ဂုဏ်ကို ဖော်ရဒါ ..
ဇာတ်လမ်း အစအဆုံးမှတ်လို့ ဝင်ဖတ်မိတာ၊ ခုတော့………. ။ ဆက်ရေး၊ ဆက်ရေး။ စောင့်ဖတ်မယ်။
အခုဖတ်ပြီးတော့လည်း ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခကို သတိရသွားမိတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲ့ ဓာတ်ပုံက မြင်ဘူးပြီးသားကြီးအေ့။
ဒီပို့စ်ဇာတ်သိမ်းဒဲ့ထိ ရေးပီး တင်ရင် တင် မဟုတ်လို့ကတော့
Ga Done Gyi says:
မင်း ဘာတွေ လျှောက်ရေးနေတာတုံး …
မင်း ဂဂျောင်ဘဲကွ ..
မင်း မိုက်လား .. မိုက်ရင် လာခဲ့ …
တောင်ဂဒုံးပေါ်က တယောသံရှင် ဟာ
အေးပါ ကိုအံဇာ မင်းဇာတ်သိမ်းကိုရေးချင်ရေး
(ဥစ္စာစောင့်များ ရှိသည်ဟူ၍ နာမည်ကြီးလှသော ရန်အောင်တောင်ပေါ်မှနေ၍ လွန်စွာ လွမ်းဆွေးဖွယ် ကောင်းလှသော တယောသံသည် ည သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် ထူးဆန်းစွာ ပေါ်ထွက်လာလေတော့၏။…….)
ဓါတ်ပုံက ဘာလို့ ပြန်ဖျက်လိုက်တာတုံး ကိုအံဇာကတုံး
ခုထိတော့ သိပ်ကြောက်စရာ မပါသေးဝူး…
ရန်အောင်တောင် ဆိုတော့ အဲဒီတောင်နေရာမှာ ရန်သူတွေကို အောင်မြင်ခဲ့လို့လို့ ထင်နေတာ။
ကြောက်တတ်တဲ့မြေးကလေးကတော့ အခုဆိုရင် မဟာရာဂျာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။
ညည်းအကြောင်းကို သိလို့ နောက်ဆုံးကို အရင်ဖတ်လိုက်တယ်..ပီးဒေါ့ အောက်က ကွန်မန့်တွေကို ကြည့်လိုက်တယ်..သိရသလောက်ကတော့ မဆုံးသေးဝူးပေါ့…
ခု အစကနေ ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်အေ…
ဒီဇာတ်လည်း ဟန်ကျပန်ကျ အဆုံးသတ်ပေးပါ သူငယ်အံ့ ။ ပေါက်ကရ တပိုင်းတစ ထားသွားလို့ကတော့ စာရေးတိုင်း အိပ်ငိုက်ပါစေတော်
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ ..
ယခုကဲ့သို့ ကျနော့်ရဲ့ မဖြစ်ညစ်ကျယ် အရေးအသားဖြင့်
ရေးသားထားပါတဲ့ ပို့စ်လေးအား ..
ဝင်ရောက်ပြီးသကာလ ကွန်မန့်များ ချီးမြှင့် သွားကြပါကုန်သော …….
ကြည်ဆောင်း၊ Mon Kit ၊ Candle ၊ ရောင်းရင်းကြီး၊ မခိုင်ဇာဝင်း၊ ငပေါက်ဖော်၊ မရွှေအိ၊ ကတုံးကြီး ၊ ဥကြီးမိုက်၊ ဖေပေါက်ဂျီး၊ အမအိ၊ ကိုရွာစား၊ အန်တီမမ၊ မမွန်မွန်၊ ဂျီးဒေါ်ပုခ်ျ
တို့အား ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ …..
ချစ်စရာကောင်းတဲ့စာမူလေးပါပဲ .။
တယောသံ မဟုတ်ဘဲ ပလွေသံ ဆိုရင် အဲ့နောက် ကို လိုက်မသွား နဲ့ နော်။ ကောင်လေး။
အား ရင်…. စာတွေ.ရေးပြီး…
အလင်းဆက် တို့ ကိ်ု…
အရီးပြ ထားတဲ့အလင်းကို ယူပြိး..
အရီးက ကျုပ်ကို အကြိုလွှတ်လိုက်တယ် …
မီးချောင်း တပ်ပေးဖို့ ….
ဟုတ် .. အရီး ..
ကိုလင်းဆက် ပြောသလိုပဲ အရီးလည်း ရေးဘာအုံးဂျ ….
မအားလည်း မအားတဲ့ကြားက ရေးဘာဂျ ..
အထက်က ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် …
အထက်က ပို့စ်က ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်သလို အခြားသူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံလည်း မဟုတ်ရပါ ခင်ဗျာ …
ဟိုလျောက်တွေး ဒီလျောက်တွေးနဲ့ ရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း …
ထိုသို့ ဟိုလျောက်တွေး ဒီလျောက်တွေးဖြင့် စိတ်ပေါက်ခိုက် စာတို့ရေးသားထားတတ်သည့် ကျနော့်ရဲ့ အကျင့်ကြောင့် ပို့စ်များအား အတို (ဒါမှမဟုတ်) အစပိုင်း များသာ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း …
ယခုပို့စ်ကို အဆုံးထိ ရေးသားသွားမည်ဟု တွေးထားပါကြောင်း ….
လာမည့် ဇာတ်ကွက်များကိုလည်း တွေးနေဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်း …..
အားပေး ဖတ်ရှုကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း ………။
အင်း .. ကြောင်း တွေလည်း တော်တော် များသွားပြီ .. အဟိ ..
ထို့ကြောင့် …ဤစာကို ဖတ်ရှုရသော ထူးဆန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သည် မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ကာ ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်၍.. ခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ် ညှိမ့်ကာ… နောက်ထွက်မည့် ဇတ်လမ်းတွဲကို …စိတ်မရှည်စွာ စောင့်မျှော်နေလေတော့သတည်း။ [:))]